Madaxweyne Yoweri Museveni (bidix) & Mwai Kibaki (midig): Nairobi Feb 11, 2004, Sawirka: Eastandard
Warar ay faafiyeen warbaahinta Kenya ayaa shaaca ka qaaday in maanta (Feb 11) uu madaxweynaha Dalka Uganda Yoweri Museveni uu ka soo degey gegida dayuuradaha ee Nairobi, Jomo Kenyatta, halkaas oo uu kusoo dhoweeyey madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki.
Waxyar ka dibna waxaa wararku sheegeen in labada madaxweyne uu kulan ku dhex maray guriga madaxtooyada kenya, inkasta oo aan la shaacin arimihii ay ka wada hadleen.
Waxaa beryahan jirey heshiis ganacsi oo lagu wadey in ay kala saxiixdaan wadama la isku yiraahdo East-Africa (Kenya, Tabzania iyo Uganda) heshiiskaas oo dhici lahaa Isniinta soo socota kana dhici lahaa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa lagu soo waramay in dib loo dhigay ilaa March 2, 2004. Dib u dhacan ayaa lagu tilmaamay in ay ka timid faraqa u dhexeeya labada madaxweyne taas oo la xiriirta xagga cashuuraha.
Arintan cashuurta ayaa la sheegay in Kenya iyo Tanzania ay isku waafaqsan yihiin in cashuurta alaabada laga soo gato dal kamid ah dalalka heshiiskan kala saxiixanaya ay ahaato 25 boqolkiiba (25%), laakiin Uganda waxa ay rabtaa in laga dhigo 20 boqolkiiba.
Waxaa wararku intaas ku dareen in madaxweynaha Uganda uu safarkan uu ku yimid Kenya uu ahaa mid hal maalin ah, lamana oga in ay ka wada hadli doonaan arimaha shirka Soomaalida hadda uga socda Nairobi.